E nwere ihe abụọ sara mbara edemede nke mmetụta na Final Cut Pro X: soja mmetụta na mmetụta Nchọgharị mmetụta.
M na e dere na mbụ banyere otú iji soja mmetụta ike a foto na-na-na foto mmetụta, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ mmetụta dị ka anyị na Final Cut. Ke ibuotikọ emi, m chọrọ igosi gị otú ị na-etinye mmetụta ka a clip, gbanwee na mmetụta, na nwa oge atụgharị na mmetụta ma ọ bụ gbanyụọ, ma ọ bụ ihichapụ ya kpamkpam.
Chọta na itinye mmetụta
Ebe a bụ anyị clip - a fearsome polar bear.
Iji tinye mmetụta, akpa họrọ clip na usoro iheomume.
Mgbe ahụ, pịa a na akara ngosi na Toolbar imeghe mmetụta Nchọgharị (ma ọ bụ pịnye Cmd + 5).
The Nchọgharị, dị ka mmetụta nile nchọgharị, depụtara edemede nke mmetụta na-ekpe, a search igbe na ala iji n'ihi na-achọ nke aha mmetụta, na mmetụta maka onye ọ bụla udi ke ziri ezi.
Ebe a, ka ihe atụ, m na-ahọrọ ghara ịma Atiya, na m na cursor nso Gaussian blur mmetụta. (Gaussian blur bụ ihe kasị mma mmetụta na-eji mgbe ị chọrọ a clip anya blurry.)
Iji tinye mmetụta, mee otu n'ime ihe abụọ:
Ịdọrọ mmetụta site na ihe nchọgharị na na clip na ị chọrọ ịgbanwe.
Ọ bụrụ na ndị clip, ma ọ bụ mkpachị, na-ahọrọ, abụọ-pịa utịp ke Nchọgharị itinye ya n'ọrụ.
Gbanwee mmetụta, pịa a na akara ngosi na Toolbar imeghe soja (ma ọ bụ pịnye Cmd + 4).
Pịa Video taabụ na soja. Mmetụta si mmetụta Nchọgharị na-mgbe e depụtara na n'elu nke soja.
Jidere a mmịfe na ịdọrọ ya ịhụ ihe na-eme. Ka ihe atụ, ime ihe oyiyi blurrier, ịdọrọ Ọnụ ego mmịfe aka nri. Ibelata mmetụta, ịdọrọ ya n'aka-ekpe.
Gbanyụọ na ihichapụ mmetụta
Iji ruo nwa oge gbanyụọ mmetụta, na-enweghị ihichapụ ya, pịa-acha anụnụ anụnụ igbe nke mere na ọ na-enyo na agba ntụ.
Aka mmetụta, pịa isi awọ igbe otú ọ na-enyo-acha anụnụ anụnụ ọzọ.
Ka ihichapụ mmetụta, pịa aha nke mmetụta - na ihe atụ a: Gaussian - na pịa nnukwu Nhichapụ isi.
The mmetụta ga-ehichapụ họrọ clip.
Extra Ebe E Si Nweta
Ị nwere ike ide, gbanwee, ọbụna ihichapụ otu mmetụta ka otutu mkpachị site mbụ ahọpụta niile mkpachị na ị chọrọ ịgbanwe na usoro iheomume ahụ na-agbakwụnye, na-agbanwe ntọala, ma ọ bụ ihichapụ ihe utịp ke soja.
The usoro nke itinye mmetụta bụ otu ihe ahụ maka ihe niile mmetụta ị na-etinye si mmetụta Nchọgharị. Na-eme n'ọdịnihu isiokwu Aga m na-egosi gị otú iji a Usoro ike a dịgasị iche iche nke dị iche iche mmetụta na Final Cut Pro X.
> Resource> FCP> FCP X: Iji tinye mmetụta